Halyeeyada Mexico: Dhaqamada iyo Taariikhda dalka Aztec | Wararka Safarka
Luis Martinez | 13/07/2021 10:00 | dhaqanka, Mexico
Markaan ka hadlayno halyeeyada reer Mexico, waxaan ka hadleynaa hiddaha iyo sheekooyinka dad hore. Ma hilmaami karno in, in badan ka hor imaanshihii Isbaanishka, dhaqanku horeyba uga jirey aagga olmec iyo ka dib Maya iyo kan uu wakiilka ka yahay reer Aztec.
Midhaha isku-darka ilbaxnimooyinkan oo dhan waa taariikhda Mexico iyo, dabcan, sidoo kale halyeeyadeeda. Qaabkan, qaar ka mid ah kuwa aan kuu sheegayno waxay ku abtirsanayaan dhaqammadii ka hor Columbian-ka, halka kuwa kale ay gadaal ka soo muuqdeen, markii dhaqammadii Isbaanishka ka hor ay ku milmeen kuwii ka yimid Qaaraddii Hore. Hadaad rabto inaad waxbadan ka ogaato Halyeeyadii Mexico, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad sii wado aqrinta maqaalkan.
1 Halyeeyada reer Mexico, laga soo bilaabo Olmecs ilaa maanta
1.1 Halyeeyga Popo iyo Itza
1.2 La Llorona, halyeey reer Mexico ah oo caan ah
1.3 Jasiiradda caruusadaha
1.4 Luuqda dhunkashada Guanajuato, halyeey reer Mexico ah oo ka buuxa heeso
1.6 Princess Donaji, halyeey kale oo reer Mexico ah oo naxdin leh
1.7 Halyeeygii Gallo Maldonado
Halyeeyada reer Mexico, laga soo bilaabo Olmecs ilaa maanta
Dhaqanka halyeeyga ah ee Mexico waa mid hodan ah oo kala duwan. Waxay koobeysaa sheekooyinka ku saabsan xiddigaha, dhalashada magaalooyin waaweyn, iyo dharkooda caadiga ah (halkan waxaad ku leedahay maqaal iyaga ku saabsan) iyo xitaa iyadoo ay aaminsan yihiin iyo cibaadooyinka dadka dalka deggan. Laakiin, adigoon ku sii dheerayn, waxaan kuu sheegi doonnaa qaar ka mid ah sheekooyinkaas.
Halyeeyga Popo iyo Itza
Snowy El Popo iyo Itza
Laga soo bilaabo Mexico City waxaad arki kartaa laba fulkaano ee ugu sareysa dalka: the Popocatepetl iyo Itzaccíhuatl, oo aan ugu yeeri doonno, fududaan, Popo iyo Itza. Labaduba waa halyeeyada sheekadan, mid ka mid ah halyeeyadii reer Mexico ee asal ahaan ka soo jeeday Aztec.
Markay magaaladani timaado aagga, waxay abuurtay wax weyn Tenochtitlan, oo ay maanta fadhiisato Magaalada Mexico. Iyadu waxay ku dhalatay amiirad Mixtli, oo ahayd gabadhii Tozic, boqorka Aztec. Markii ay gaartey da'da guurka, waxaa sheegatay, kuwo kale oo badan, Axooxco, oo ah nin naxariis daran.
Haddana waxay jeceshahay dagaalyahanka Popoca. Isaga, inuu uqalmo taas, waxay noqotay inuu noqdo guuleyste oo uu gaaro cinwaanka Gorgor Knight. Dagaal ayuu galay wuuna maqnaa muddo dheer. Laakiin habeen ka dib, Mixtli waxay ku riyootay in gacaliyaheeda uu ku dhintay dagaalka isla markaana uu naftiisa dilay.
Markuu Popoca soo noqday sannado kadib, wuxuu ogaaday in gacalisadiisii ​​dhimatay. Si uu ugu sharfo iyada, wuxuu ku aasay qabri weyn oo uu dul dhigay toban buurood wuxuuna u ballanqaaday inuu weligiis la sii joogi doono. Waqti ka dib, barafku wuxuu qariyey tuulmigii aaska Mixtli iyo jidhka Popoca, taasoo keentay Itza iyo Popo.
Halyeeygu wuxuu sii wadaa in dagaalyahanku wali jacayl u qabo amiiradda iyo, markuu qalbigiisa gariiro, volcano ceyriso fumaroles.
La Llorona, halyeey reer Mexico ah oo caan ah
Madadaalada La Llorona
Waxaan bedeleynaa xilliga, laakiin ma ahan aagga inaan kuu sheegno halyeeyga La Llorona. Waxay sheegaysaa in, xilliyadii gumaysiga, gabadh yar oo asal ahaan asal ah ay xidhiidh la yeelatay mudane Isbaanish ah oo ay saddex carruur ahi ka dhasheen.
In kasta oo ay damacsanayd inay guursato gacaliyaheeda, haddana wuxuu ka doorbiday inuu sidaas ku guursado gabadh Isbaanish ah oo gabadha u dhalatayna maskaxdeeda ka baxday. Sidaa darteed, wuxuu ku socday Harada Texcoco, halkaas oo ay ku liqday seddexdeeda caruur ah ka dibna ay isku tuurtay. Tan iyo markaas, waxaa jira dad badan oo sheeganaya inay ku arkeen hareeraha harada naag dhar cad xidhan kaasoo ka calaacalaya masiibada murugada leh ee caruurteeda waxayna ku dambeysaa inay ku laabato Texcoco si ay isugu biiriso biyaheeda.
Caruusadaha waligood waxay lahaayeen laba waji. Dhinac, waxay u adeegaan kuwa yaryar si ay u ciyaaraan. Laakiin, dhinaca kale, xaaladaha qaarkood waxay leeyihiin wax qarsoodi ah. Tani waa sida saxda ah waxa ka dhacaya jasiiradda Dolls-ka.
Waxay ku taal aagga of Xochimilco, oo labaatan kiilo mitir uun u jirta Magaalada Mexico City. Waxaad halkaas ku imaan kartaa adigoo ka gudbaya kanaallada doomaha dhaqameed ee xiisaha leh ee la yiraahdo trajineras.
Xaqiiqdu waxay tahay in Jasiiradda caruusadaha ay ku taal halyeeyo cabsi badan. Dhinaca kale, midka sharraxaya asalkiisa ayaa ah, si fudud, murugo maxaa yeelay wax walba waxay ka dhashaan gabar biyo ku liqday.
Don Julian Santana wuxuu ahaa milkiilaha beeraha (luuqada Nahuatl, chinampas) meeshuu yaalay meydka gabadha yari. Milkiilaha dhulka lagu kalsoonaan karo ayaa iska dhaadhiciyay inay iyadu u muuqato isaga, si ay uga nixiso, wuxuu bilaabay inuu caruusado dhigto dhammaan hantidiisa.
Cajiib, halyeeygu wuxuu sii wadaa inuu yiraahdo hadda waa Don Julián soo noqo waqti ka waqti si ay u daryeesho caruusadeeda. Sikastaba xaalku ha noqdee, hadaad ku dhiiratid inaad booqato jasiiradda, waxaad arki doontaa inay leedahay hawo runtii dahsoon oo mugdi leh.
Luuqda dhunkashada Guanajuato, halyeey reer Mexico ah oo ka buuxa heeso
Waxaan hadda u safreynaa magaalada Guanajuato, caasimada gobolka isla magaca ah kuna yaalo bartamaha dalka, si aan kaaga waramo halyeeygan reer Mexico ee jacaylka badan. Gaar ahaan waxaan tixraaceynaa luuqda dhunkashada, waddo yar oo kaliya 68 sentimitir ballaaran oo balakoonnadeedu ay yihiin, sidaa darteed, ay ku dhowdahay inay ku dhegan yihiin.
Waxay si sax ah ugu jirtay iyaga Carlos Iyo Ana, Lamaane isjecel oo waalidkood mamnuucay xiriirkooda. Gabadha aabaheed markii uu ogaaday inay ku caasiday ayuu ku dilay asaga oo seef dhabarka kaga dhejinaya.
Carlos, markuu arkay maydka gacalisadiisa, ayuu dhunkaday gacanteeda oo weli diirran. Halyeeygu halkaas kuma eka. Waa inaad ogaataa taas, haddii aad booqato Guanajuato adiga iyo lammaanahaaga, waa inaad dhunkataa tallaabada saddexaad ee wadada. Hadaad sameyso, sida dhaqanku qabo, waad heli doontaa toddobo sano oo farxad ah.
Qalcadda San Juan de Ulúa
Waxaan hadda u dhaqaaqeynaa Veracruz (halkan waad haysataa maqaal ku saabsan waxa lagu arko magaaladan) inaan kuu sheego sheeko kale oo qiiro leh, in kastoo xaaladdan masayrka iyo aargoosiga madow ah. Halyeeygan reer Mexico wuxuu sheegayaa in haweeney mulatto ah oo qurux badan sidii ay ahayd asalkeeda aan la garanayn ay ku nooshahay magaalada.
Kaasi wuxuu ahaa quruxdeedii oo ay marar dhif ah u soo baxday waddada si aysan u kicin xanta. Si kastaba ha noqotee, suurtagal ma ahayn in laga fogaado. Dadkuna waxay bilaabeen inay yiraahdaan waan haystay awoodaha sixirka. Tani waxay bilaabatay inay kiciso tuhunka walaalihiis.
Si kastaba ha ahaatee, Martin de Ocaña, duqa magaalada, jacayl waali ah ayuu u qaaday iyada. Xitaa wuxuu u soo bandhigay dhammaan noocyada kala duwan ee dahabka si ay u guursato. Laakiin mulatto ma aqbalin taasna iyada ayaa ku dhacday. Nacas, taliyuhu wuxuu ku eedeeyay iyada inay siisay sixir sixir ah oo uu ugu dhaco shabagyadiisa.
Markii ay la kulantay eedeymaha noocan oo kale ah, haweeneyda ayaa lagu xiray guriga Qalcadda San Juan de Ulúa, halkaas oo iyada la isku dayay laguna xukumay inay dhinto iyada oo la wada gubay dadka oo dhan. Intii uu sugayay ciqaabtiisa, wuxuu ku qanciyay waardiye inuu siiyo nuurad ama gis. Isaga oo wata, ayuu soo jiitay markab wuxuuna waydiiyay xabsihayihii waxa meesha ka maqan.
Tani waxay ku jawaabtay socodka. Kadib, mulatto quruxda badan waxay tiri "fiiri sida ay wax uqabato" oo, bood bood, ayay fuushay doontii, kahor intaan indha la'aanta waardiyaha ilaalin, ayay ka amba baxday cirifka.
Princess Donaji, halyeey kale oo reer Mexico ah oo naxdin leh
Halyeeygan kale ee aan kuu keenayno waxaa iska leh hiddaha iyo dhaqanka gobolka Oaxaca waxayna dib u bilaabatay waqtiyadii ka hor Columbian-ka. Donaji Waxay ahayd Amiirad Zapotec, ayeeyo u ahayd King Cosijoeza. Waqtigaas, magaaladan waxay dagaal kula jirtay Mixtec-ka.
Sababtaas awgeed, waxay afduubteen amiiradii. Si kastaba ha noqotee, iyadoo loogu hanjabayo kuwa ka soo horjeeda, ayay qoorta ka jareen, inkasta oo aysan waligood sheegin halka ay ku aaseen madaxeeda.
Sanado badan kadib, wadaad ka tirsan aagga uu maanta joogo San Agustín de Juntas wuxuu la jiray xoolihiisa. La helay qaali ubax oo, isagoo aan rabin inuu waxyeelleeyo, wuxuu doortay inuu ku qodo xididkiisa. Si la yaab leh, markii uu qoday, madaxa aadanaha ayaa ka muuqday xaalad kaamil ah. Waxay ahayd Princess Donaji. Sidaa darteed, jidhkiisa iyo madaxiisuba way midoobeen oo waxaa loo keenay Macbadka Cuilapam.
Halyeeygii Gallo Maldonado
Ma joogsan doono inay noqoto wax lala yaabo inta halyeeyada reer Mexico ay ku leeyihiin niyad jabka jacaylka. Hagaag, kan aan kuu keeneyno inaad joojiso safarkayagu wuxuu sidoo kale kuxiran yahay qalbi jabay.
Luis Maldonado, oo loo yaqaan Gallo Maldonado, wuxuu ahaa gabyaa da 'yar oo ku noolaa San Luis de Potosí. Wuxuu ahaa dabaqadda dhexe laakiin wuu jeclaaday Eugenia, oo ka tirsanaa qoys hodan ah. Waxay lahaayeen xiriir waara, laakiin maalin maalmaha ka mid ah gabadhii yarayd waxay u sheegtay inay joojineyso jaceylkeeda oo aysan markale raadin.
Isaga oo ka niyad jabsan, jacaylkii yaraa ayaa sii xumaanayay, oo cabitaan ugu beddelay gabayo, illaa uu ka bukooday oo uu dhintay. Si kastaba ha noqotee, waxaa layaab ku noqotay eheladiisa, maalin maalmaha kamid ah ayaa qof garaacay albaabka guriga wuxuuna noqday Maldonado. Ma uusan sharixin waxa dhacay, kaliya wuxuu u sheegay inuu qabow yahay oo ay isaga u ogolaadeen.
Sidii ayey yeeleen, laakiin ninki nasiibka daraa wuxuu si dhakhso leh dib ugu bilaabay noloshiisii ​​bohemian iyo sharaf dhac. Tani muddo ayey socotey, ilaa, mar labaad, Maldonado Gallo la waayey, markan weligiis. Weligood war dambe kamay maqal.
Laakiin hadda waxaa yimid sheekada ugu fiican. Qaar ka mid ah lamaanayaasha jacaylka jecel ee jacaylkooda ku dhex maray xarunta taariikhiga ah ee San Luis de Potosí maalmaha dayaxa oo buuxa ayaa sheegay in Gallo Maldonado ayaa iyaga u muuqday si ay u tiriyaan gabay shucuur leh.
Gabagabadii, waxaan kuu sheegnay qaar badan oo ka mid ah Halyeeyadii Mexico taas oo calaamad u ah sheeko-faneedka waddanka Aztec. Laakiin wax badan ayaan kaaga sheegi karnaa. Xitaa haddii ay tahay oo keliya in la gudbo, waxaan sidoo kale kuu soo qaadan doonnaa midka ka yimid galley soo hel dhinaca Aztec-ka, ee ah Charro Negro, ee gacanta ooday, ee ah dariiqa ilmaha lumay ama tan abeesada baalasha leh ama Quetzalcoatl.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » America » Mexico » Halyeeyadii Mexico